Diyo post :: यिनै हुन् सुमनकी आमा लक्ष्मीलाई पोलमा बाँधेर दिसा खुवाउने शिक्षक यिनै हुन् सुमनकी आमा लक्ष्मीलाई पोलमा बाँधेर दिसा खुवाउने शिक्षक - Diyo post
प्रचण्डको भावुक मन्तव्य,‘प्रकाश अब छैनन, तर देशका सबै युवायुवती हाम्रा छोरा प्रकाश हुन्’
राताे घेरामा शिक्षक हिरा लामा
काठमाडौं, २७ मंसिर । बोक्सी आरोपमा काभ्रेको सानोथवाङ—७ की ३३ वर्षीया लक्ष्मी परियारको हत्या भएपछि सामाजमा फेरी यतिबेला विभदको कुरुपता देखिन थालेको छ । समाजको भविष्य फूलाउने सामाजिक शिक्षाकै शिक्षकको नेतृत्वमा लक्ष्मिको हत्या गरिएपछि कथित शिक्षित जमातमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
स्थानिय सुर्योदय माध्यमिक विद्यालयमा सामाजिक शिक्षा अध्यापन गराउँने शिक्षक हिरा लामाको नेतृत्वको समुहले लक्ष्मिमाथि पोलमा बाँधेर कुटपीट गरेपछि हत्या गरेको रहस्य पत्ता लागेको थियो ।
लक्ष्मिको छोरा तथा प्रत्यक्षदर्शी सुमन नेपालीका अनुसार उनकी आमालाई विद्यालयको खेल मैदानमा रहेको भलिबलको पोलमा बाँधेर कुटपीट गरि मलमुत्र खुवाइएको थियो ।
‘स्कुलको मैदानमा भलिबलको पोल छ । त्यही पोलमा हिरा सर र उहाँको आमाले मेरो ममीलाई बाँध्न लाग्नुभयो । तर, पोलमा काँटी रहेछ, ठेलमठेल हुँदा काँटीले सरकी आमालाई घोच्यो । त्यसैले उहाँ एकैछिन रोकिनुभयो । त्यतिन्जेलसम्म गाउँलेहरु जम्मा भइसकेका थिए । छिमेकी साइला तामाङकी श्रीमती निरमाया तामाङले नाम्लो दिइन् । नाम्लो लिएर हिरा सर आफैँले ममीलाई गेटमा बाँध्नुभयो । सुरुमा घाँटी र कुममा बाँधेर हिरा सरले ममीलाई कुट्न थाल्नुभयो । त्यतिन्जेलसम्म हिरा सरको आमा अन्त कता जानुभयो थाहा भएन । पछि त दिसा लिएर आउनुभयो । सरको आमा आइसकेपछि दिसा खुवाउन खोजे, ममीले मान्नुभएन। त्यसैले मेरो ममीको खुट्टा पनि बाधेँ र दिसा खुवाइदिए ।’ आइतबारको नयाँ पत्रिकामा सुमनले दिएको बयानमा भनिएको छ,‘त्यसपछि पनि गाउँलेहरु त्यहीँ बसिरहे । केहीबेरमा उनीहरुले छोडिदिएपछि म र भाइलाई लिएर ममी घरतिर हिँड्नुभयो । हामी मेलडाँडा भन्ने ठाउँमा आइपुगेका थियौँ । पछाडिबाट हिरा सर दाउराको चिरपट बोकेर आउनुभएको रैछ । अनि ममीको कपाल समाएर लडाउनुभयो र खुट्टाले थिच्नु भयो । चिरपटले ममीको टाउकोमा हान्नु भयो । ममीको टाउकोमा गहिरो घाउ लाग्यो । ममीको टाउकोबाट रगत बगिरहेको थियो । त्यसपछि पनि सरले ममीको छातीमा चार लात्ती हान्नुभयो ।’
यस्तो कुटपीटबाट गम्भिर घाइते भएकी लक्ष्मिको परिवारले चौवास प्रहरी चौकीमा निवेदन दिएकी थिइन् । तर, जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेकै सहयोगमा चौवास प्रहरीले मिलापत्र गराएको थियो । समाचारमा जनाइए अनुसार शिक्षक हिरा लामाको आर्थिक प्रभावमा परेर चौकीका असई प्रेम चौधरीले जबरजस्ति मिलापत्र गराएका थिए ।
यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिव प्रसाद सिंखडाले घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको बताएका छन् । ‘हामीले चार जना शंकास्पद व्यक्तिहरुलाई पक्राउ गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अनुसन्धानबाट सत्य पत्ता लाग्छ ।’
काभ्रे प्रहरीले अनुसन्धानको लागि शिक्षक हिरा लामा, लक्ष्मिका श्रीमान मिलन परियार, साइला तामाङ लगायत चार जनालाई पक्राउ गरेको जनाएको छ ।
प्रचण्ड निवासमा प्रकाश दाहालको श्रद्धाञ्जली सभा, मञ्चमै भक्कानिइन् सिता दाहाल !
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका पुत्र प्रकाश दाहालको श्रद्धाञ्जली सभामा विशिष्ट अधिकारीहरु उपस्थित भएका छन् । ...
यस्ता छन् धादिङ क्षेत्र नम्बर २ ‘ख’ प्रदेश सभाका बाम गठबन्धनका उम्मेदवार जगत सिंखडाका प्रतिबद्धता
नेपालमा राजनीतिक क्रान्तिका लागि ठूला संघर्षहरु भएका छन् । त्यो मध्ये १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनले मुलुकमा ...
एडिबिको आर्थिक सहायता स्विकार गर्ने मन्त्रीपरिषदको निर्णय
काठमाडौं, ६ मंसिर । मन्त्रिपरिषद्को आजको बैठकले नेपालको शहरी क्षेत्रको विकास तथा आधुनिकीकरणका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त रकम स्वीकार ...
प्रचण्डको समर्थनमा भरतपुरमा निस्कियो यस्तो गाडी, लेखियो,‘वि आर वीथ प्रचण्ड, बि स्ट्रोङ’ !
काठमाडौं । पुत्र वियोगकै बीच चितवनको भरतपुर पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पक्षमा भरतपुरमा ठूलो जनमत खडा ...
साहसिक प्रचण्ड : पुत्र वियोगको दुई दिनमै सपरिवारसहित चितवनको भरतपुर पुगे
चितवन । पुत्र वियोगमा रहेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ चुनावी सभामा सहभागी हुन चितवनको भरतपुर पुगेका छन् । ...
एनालग टिभि बन्द गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
काठमाडौ । सर्वोच्च अदालतले एनालग टेलिभिजन सेवा तत्काल बन्द नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । डिजिटल प्रणाली ...
प्रचण्डलाई समवेदना दिन देउवा र ओली लाजिम्पाटमा
काठमाडौं, मंसिर ४ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षको परिवारमा परेको पुत्र शोकमा समवेदना दिन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा तथा नेकपा ...
नर्भिक पुगे प्रचण्ड संगै सपरिवार,नाजुक अवस्थामा प्रकाशकी पत्नि
नर्भिक पुगे प्रचण्ड संगै सपरिवार,नाजुक अवस्थामा प्रकाशकी पत्नि काठमाडौ । प्रचण्ड नर्भिक अस्पताल परिसरमा प्रवेश गरेका छन । छोरा प्रकाश ...
अस्पताल ल्याइनु अगाडी नै प्रकाशको निधन भइसकेको नर्भिक अस्पताल प्रशासनको खुलासा
काठमाडौ । प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालले अस्पताल पुग्नु अगावै देहत्याग गरिसकेको नर्भिक अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । विहान हृदयघात भइ ...